SONATA-CANTATA: လွတ်မြောက်မှုသို့ ကိုင်းညွှတ်ခြင်း
ငှက်တစ်ကောင်၏ ကျော့ကွင်းမှ လွတ်မြောက်မှု, လူသားတစ်ဦး၏ နိုင်ငံရေး, စီးပွားရေး, လူမှုရေး လွတ်မြောက်မှု, အရိယာ သူတော်စဉ်တို့၏ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်မှုတို့သည် သဘောသဘာဝချင်း, အဆင့်အတန်းချင်း ကွဲပြားခြားနားကြသော်လည်း “အနှောင်အဖွဲ့မှ လွတ်လပ်ခြင်း” ဟူသော အနှစ်သာရမှာ အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ နိမိတ် သင်္ကေတများသည်လည်း အတူတူပင် ဖြစ်သည်။
အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းကိုဆောင်သော နေမင်းသည် လောကသားတို့၏ အကြောက်တရားကို ပယ်ရှား၍ ရဲဝံ့ခြင်းကို ပေးတတ်သောကြောင့် “သူရိယ” ဟု အမည်တွင်သည်။ အ၀ိဇ္ဇာအမှောင်ကို ခွင်း၍ သစ္စာအလင်းရောင် ပေးသော သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်အောင် ဆောင်ကြဉ်းပေးသည့် ဘုရားရှင်တို့အား နေမင်း (အာဒိစ္စ) ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ပွင့်တော်မူပြီးကုန်သော ဘုရားရှင်များ, ဘုရားရှင်တို့၏ ဗောဓိဉာဏ်, ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်သူများနှင့် လွတ်မြောက်မှု ၀ိမုတ္တိတရားတို့အား ရည်မှန်း၍ နံနက် နေထွက် အစာရှာထွက်ချိန်, ညနေ နေ၀င်ချိန် အိပ်တန်းတက်ချိန်တို့တွင် နေမင်းအား ကိုင်းညွှတ် ရှိခိုး၍ အရံအတားပြုသောကြောင့်၊ အလောင်းတော် ဥဒေါင်းမင်းသည် မုဆိုးတို့၏ ကျော့ကွင်းရန်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ လွတ်မြောက်ခဲ့ဖူးသည်ကို ဒုကနိပါတ် မောရဇာတ်တွင် ဟောကြားထားသည်။
မိမိတို့၏ အနှောင်အဖွဲ့ဘေးတို့မှ လွတ်မြောက်နိုင်ရန် ထိုမောရဇာတ်လာ ဂါထာတို့အား အရံအတား ပရိတ် မန္တန်အဖြစ် ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်ကြသည်။ လွတ်မြောက်မှုကို အလိုရှိသူသည် လွတ်မြောက်သူတို့နှင့် လွတ်မြောက်မှုတရားအား ရည်မှန်း ဦးခိုက်ကာ အစဉ်သတိတရား လက်ကိုင်ထား၍ ကျင့်ကြံနေထိုင် သွားကြရသည်။
ယေန သံဝိဟိတာ ရက္ခံ၊ မဟာသတ္တံ ၀နေစရာ။
စိရဿံ ၀ါယမန္တာပိ၊ နေ၀သက္ခိံသု ဂဏှိတုံ၊
ဗြဟ္မမန္တန္တိ အက္ခာတံ၊ ပရိတ္တံ တံ ဘဏာမ ဟေ။
ဗောဓိဉာဏ်၏ အဆောက်အဦဖြစ်သော ပါရမီတို့ကို ဖြည့်ကျင့်လျက် ဥဒေါင်းငှက်မျိုး၌ ဖြစ်စဉ်
အကြင်ပရိတ်တော်ဖြင့် စီမံ စောင့်ရှောက်ထားသော ဘုရားအလောင်း ဥဒေါင်းမင်းကို တောမုဆိုးတို့သည်
ဖမ်းယူရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားကြသော်လည်း မဖမ်းနိုင်ကြ။
အိုသူတော်ကောင်းတို့… “ဗြဟ္မမန္တန်” ဟု ဆိုအပ်သော (ဤမောရသုတ်) ပရိတ်တော်ကို ရွတ်ဖတ်ကြပါကုန်စို့။
တံ တံ နမဿာမိ ဟရိဿဝဏ္ဏံ၊ ပထ၀ိပ္ပဘာသံ။
တယာ’ဇ္ဇာ ဂုတ္တာ ၀ိဟရေမု ဒိဝသံ။
(အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းဆောင်ကာ) အမြင်ဓာတ်ကို ပေးတတ်သူတို့တွင် မင်းမြတ်ဧကရာဇ်ဖြစ်သော၊ ရွှေအဆင်းနှင့်တူသော အလင်းဖြင့် ကမ္ဘာမြေကို ထွန်းလင်းစေသော ရှင်နေမင်းသည် အရှေ့လောကဓာတ်မှ ထွက်ပေါ်၍ လာ၏။ ထို ရွှေအဆင်းနှင့်တူသော အလင်းဖြင့် ကမ္ဘာမြေကို ထွန်းလင်းစေသော ရှင်နေမင်းအား ရှိခိုးပါ၏။ ယနေ့အဖို့ ရှင်နေမင်း၏ အစောင့်အရှောက်ကို ခံယူ၍ ကျွန်ုပ်သည် ဤတစ်နေ့တာ ကာလပတ်လုံး ချမ်းသာစွာ နေရပါလို၏။
ယေဗြဟ္မဏာ ဝေဒဂူ သဗ္ဗဓမ္မေ၊
နမော ၀ိမုတ္တာနံ, နမော ၀ိမုတ္တိယာ။
အလွန်စင်ကြယ် မြင့်မြတ်သော ဘုရားရှင်တို့သည် တရားအလုံးစုံကို သိမြင်တော်မူကြ၏။ ထိုဘုရားရှင်တို့သည် အကျွန်ုပ်၏ ရှိခိုးခြင်းကို ခံတော်မူကြပါကုန်။ ထိုဘုရားရှင်တို့သည် အကျွန်ုပ်အားလည်း စောင့်ရှောက်တော်မူကြပါကုန်။ (ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံပြီးကုန်သော) ဘုရားရှင်တို့အား အကျွန်ုပ်၏ ရှိခိုးခြင်းသည် ဖြစ်ပါစေ။ ထိုဘုရားရှင်တို့၏ ဗောဓိဉာဏ်တော်ကို အကျွန်ုပ်၏ ရှိခိုးခြင်းသည် ဖြစ်ပါစေ။ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်ကြကုန်သော ဘုရားရှင်တို့အား ရှိခိုးပါ၏။ ထိုဘုရားရှင်တို့၏ လွတ်မြောက်မှု ၀ိမုတ္တိတရားအားလည်း ရှိခိုးပါ၏။ ဤသို့ အရံအတားကိုပြုလုပ်၍ လှည့်လည် အစာရှာဖွေ၏။
တယာ’ဇ္ဇာ ဂုတ္တာ ၀ိဟရေမု ရတ္တိံ။
(အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းဆောင်ကာ) အမြင်ဓာတ်ကို ပေးတတ်သူတို့တွင် မင်းမြတ်ဧကရာဇ်ဖြစ်သော၊ ရွှေအဆင်းနှင့်တူသော အလင်းဖြင့် ကမ္ဘာမြေကို ထွန်းလင်းစေသော ရှင်နေမင်းသည် အနောက်လောကဓာတ်သို့ ၀င်လေပြီ။ ထို ရွှေအဆင်းနှင့်တူသော အလင်းဖြင့် ကမ္ဘာမြေကို ထွန်းလင်းစေသော ရှင်နေမင်းအား ရှိခိုးပါ၏။ ယနေ့အဖို့ ရှင်နေမင်း၏ အစောင့်အရှောက်ကို ခံယူ၍ ကျွန်ုပ်သည် ဤတစ်ညတာ ကာလပတ်လုံး ချမ်းသာစွာ နေရပါလို၏။
အလွန်စင်ကြယ် မြင့်မြတ်သော ဘုရားရှင်တို့သည် တရားအလုံးစုံကို သိမြင်တော်မူကြ၏။ ထိုဘုရားရှင်တို့သည် အကျွန်ုပ်၏ ရှိခိုးခြင်းကို ခံတော်မူကြပါကုန်။ ထိုဘုရားရှင်တို့သည် အကျွန်ုပ်အားလည်း စောင့်ရှောက်တော်မူကြပါကုန်။ (ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံပြီးကုန်သော) ဘုရားရှင်တို့အား အကျွန်ုပ်၏ ရှိခိုးခြင်းသည် ဖြစ်ပါစေ။ ထိုဘုရားရှင်တို့၏ ဗောဓိဉာဏ်တော်ကို အကျွန်ုပ်၏ ရှိခိုးခြင်းသည် ဖြစ်ပါစေ။ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်ကြကုန်သော ဘုရားရှင်တို့အား ရှိခိုးပါ၏။ ထိုဘုရားရှင်တို့၏ လွတ်မြောက်မှု ၀ိမုတ္တိတရားအားလည်း ရှိခိုးပါ၏။ ဤသို့ အရံအတားကိုပြုလုပ်၍ မိမိ၏နေရာ၌ နေ၏ (အိပ်တန်းတက်၏)။
(ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာ ရောင်ဝါနေသို့ လင်းပါစေ… မတရားသဖြင့် အချုပ်အနှောင်ခံနေကြရသူများ အားလုံး လွတ်မြောက်ကြပါစေ … )
၁။ ဇာတက-၁၅၉၊ ဒုကနိပါတ်-မောရဇာတ်
၂။ ဦးပညာသာမိ (မာဂဓီ-သာစည်) - ဆယ်စောင်တွဲသင်တန်း မြန်မာပြန်ကျမ်း
၃။ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ - ပရိတ်ပါဠိ, ပရိတ်ကြီးနိဿယနှင့် ပရိတ်တရားတော်များ
၄။ The Jataka - Stories of the Buddha’s former births, translated by E.B. Cowell (http://www.sacred-texts.com/bud/j2/j2012.htm)
Labels: ဇာတက, ပရိတ်ကြီး, ဧရာ
ဘေးအန္တာရာယ် ကင်းရှင်းအောင် ဥပေတယံ အစချီတဲ့ မောရသုတ် ရွတ်ရတယ်ဆိုတာ ဘုရားလောင်း ဥဒေါင်းမင်းရဲ့ သာဓကလေးထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ် အကိုရေ။ အမေစုနဲ့ တကွ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ဘေးအန္တာရာယ် ကင်းရှင်းကြပါစေ.....
လွတ်မြောက်လာသော မြန်မာပြည်ရဲ့ မိခင်ကြီးအတွက် လှိုက်လှဲဝမ်းသာဖြစ်ရသလို
မတရားမှုမှန်သမျှ ကင်းရှင်းပပျောက်ပြီး တရားသဖြင့် အနိုင်ရသူသာ ကြီးစိုးခွင့်ရပါစေ...
မင်္ဂလာရှိသော တရားတော်ပါ ဦးဧရာ..
လွပ်မြှောက်ခြင်းပိုစ့်လေးကို အရသာ ရှိရှိ ဖတ်သွားပါတယ်။
14 Nov 10, 12:45
မန်းကိုကို: ဝမ်းသာတာ အရှိန်မကုန်သေးလို့ လိုက်လည်နေတယ်ဗျို့ :run
14 Nov 10, 12:53
tg: (ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာ ရောင်ဝါနေသို့ လင်းပါစေ… မတရားသဖြင့် အချုပ်အနှောင်ခံနေကြရသူများ အားလုံး လွတ်မြောက်ကြပါစေ … )
S-C: ဦးမန်း, tg :)
14 Nov 10, 21:25
Jelina: A big smile at your blog
14 Nov 10, 22:18
ုကိုသိန်းဖေ: ကိုဧရာ ဆုတောင်း သလို မတရား သဖြင့် ချုပ်နှောင်ခံနေကြသူများ အားလုံး လွတ်မြောက်ကြပါစေ လို့ ထပ်ဆင့် ဆုတောင်းလိုက်ပါရစေ။
မောရသုတ်ကို အဓိပ္ပာယ်နဲ့တကွ ရေးသားတင်ပြတာ ကျေးဇူးပါ။
သူမ၏ လွတ်မြောက်မှုသည် သက်ဆုံးတိုင်ဖြစ်ပါစေသတည်းလို့ ရင်ထဲမှာ ဆုတောင်းနေမိတယ်။
I agree with most of your points, butafew need to be discussed further, I will holdasmall talk with my partners and perhaps I will ask you some advice later.
hi I was luck to seek your topic in google